ရှင်းကျန်းဒေသ၏ ပြည်ပကုန်သွယ်မှု ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအတွင်း ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း (ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ မြို့တော် ဝူးလူမုချီမြို့အတွင်း သွားလာနေကြသည့် မော်တော်ယာဉ်များအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝူးလူမုချီ ၊ မေ ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ရှင်းကျန်း (ဝေဂါ) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသည် ယခုနှစ် ပထမလေးလတာအတွင်း ပြည်ပကုန်သွယ်မှု ယွမ် ၅၂ ဘီလီယံဝန်းကျင်(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၇ ဘီလီယံခန့်) ရှိကာ နှစ်အလိုက် ၃၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းအကောက်ခွန်ရုံးထံမှ သိရသည်။
ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ ရှင်းကျန်းဒေသ၏ ကုန်တင်ပို့မှုများသည် ယွမ် ၄၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး နှစ်အလိုက် ၄၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာကြောင်း ဝူးလူမုချီအကောက်ခွန်ရုံးထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါကာလအတွင်း ဒေသ၏ ရပ်ဝန်း နှင့် ပိုးလမ်းမတစ်လျှောက်ရှိ နိုင်ငံများနှင့် ပြည်ပကုန်သွယ်မှုသည် ယွမ် ၄၇ ဒသမ ၄၆ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် အလားတူကာလကထက် ၄၅ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကာ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု(RCEP) အဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ကုန်သွယ်မှုမှာ ယွမ် ၃ ဒသမ ၃၄ ဘီလီယံအထိ ၃၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လုပ်သားအခြေပြုထုတ်ကုန်များ ၊ စက်မှု နှင့် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များသည် ရှင်းကျန်းဒေသ၏ အဓိကပို့ကုန်များ ဖြစ်ကြောင်း အကောက်ခွန်ရုံးထံမှ သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘက်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းထားသောအကောက်ခွန်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာနယ်မြေလေးခုဖြစ်သည့် Kashgar ၊ Alashankou ၊ Horgos နှင့် ဝူးလူမုချီတို့၏ ပို့ကုန် ၊ သွင်းကုန် ပမာဏသည် ယွမ် ၉ ဒသမ ၅၃ ဘီလီယံအထိ နှစ်အလိုက် ၁၃၀ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး လေးလတာအတွင်း ရှင်းကျန်းဒေသ၏ စုစုပေါင်း ပြည်ပကုန်သွယ်မှု၏ ၁၈ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Xinjiang’s external trade up over 33 pct in January-April
URUMQI, May 18 (Xinhua) — Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region saw foreign trade of around 52 billion yuan (about 7.7 billion U.S. dollars) in the first four months of this year, up 33.7 percent year on year, according to local customs.
From January to April, Xinjiang’s exports reached 42.5 billion yuan, markingayear-on-year growth of 45.4 percent, according to Urumqi customs.
During this period, the region’s foreign trade with countries along the Belt and Road topped 47.46 billion yuan, up 45.2 percent from the same period last year, while its trade with members of the Regional Comprehensive Economic Partnership rose 30.8 percent to 3.34 billion yuan.
Labor-intensive, mechanical and electrical products were Xinjiang’s major exports, according to the customs.
Meanwhile, the import and export volume of the four integrated bonded areas, namely, Kashgar, Alashankou, Horgos and Urumqi surged by 130.2 percent year on year to 9.53 billion yuan, accounting for 18.3 percent of Xinjiang’s total foreign trade in the four months. ■
Photo – Vehicles run onaroad in Urumqi, capital of northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region, at 2:30 a.m. Dec. 22, 2021. (Xinhua/Ma Kai)